TOOBADA(Hadhwanaagnews) Saturday, July 21, 2012 Culimadu waxay yidhaahdeen: Waa waajib in dembi walba laga toobad keenaa, waxayna toobadu Culimadu waxay yidhaahdeen: Waa waajib in dembi walba laga toobad keenaa, waxayna toobadu leedahay shuruudo dhowr ah, oo marna seddex ah, marna afar ah. Mar waa seddex oo waa markii uu dembigu yahay wax addoonka iyo Rabbigiis ka dhexeeya, markaasna waxay shuruudu tahay inuu qofku dembigii ka fuqo iyo inuu ka qoomamoodo, iyo tan seddexaad oo ah inuu qofku go´aansado inuu san dembigaas u noqon dib dembe. Marka kale oo ay shuruuddu afarta tahayna waa markii uu dambigu lug ku leeyahay xaq Aadane, oo waa in xaqaas Aadane la gudo oo laga xalaaloobo, hadduu maal yahay la gudo, hadduu qadaf ama qaan yahay qofkii oo la isu dhiibo, gudayayaa iyo cafiyayaaba, iyo haduu xan yahay oo iyadana laga codsado
cafis, waxaa iyaduna waajib ah in dambiyada oo dhan laga toobad keeno, haddii uu qofku qaar ka toobad keenana waa ka ansaxaysaa toobadu, oo qaarkaas waa laga cafinayaa, dembigii uusan ka toobad keeninna way ku hadhayaan oo laga cafiyi maayo, jeer uu ka toobad keeno. Toobadu inay waajib tahay Qur´aanka iyo sinnahaa caddeynaaya, ummaduna waa ay isku raacsan tahay.
19. Zirr ibn Xubaysh (A.K.R.) wuxuu yiri: waxaan u tegey Safwaan ibn Cassaal (A.K.R.) anigoo raba inaan ka wareysto masaxa kabaha buudka gacmaha la kor mariyo marka la weeysaysanayo. Wuxuu i weydiiyey: Ziirrow, maxaad doonaysaa? Waxaan ku jawaabay, ´Cilmi doon baan ahaa.´ Wuxuu yiri: Malaa´igtu garbahay u raaricisaa qofka cilmi doonka ah, raali ayay ka tahay waxaa uu doonayo awgeed. Waxaan u sheegay inuu wareer iga galay arrinta ku saabsan marinta gacmaha dusha sare uu ka mariyo kabaha buudka qofka weeyseysanaya, kaadi ama saxaro kaddib. Addigaana arrintaas kuu soo aadey oo asxaabtii Nabiga (S.C.W.) ka mid ah, ee wax ma ka maqashay nabiga arrintaas la xirriirta ? Wuxuu yiri: Haa, Wuxuu na odhan jirey markaan safar nahay ha siibina buudkiinna seddex maalmood iyo habeennadooda, inaad isku junuubtaan maahee oo ha u siibina hurdo iyo saxaro iyo kaadi dartood.
20. Abuu Saciid al-Khudri (A.K.R.) wuxuu yiri: Nabigu (S.C.W.) wuxuu yiri:  Nin ka mid ahaa ummadahii idinka horreeyey, oo diley sagaal iyo sagaashan qof, baa dadkii weydiiyey yaa u aqoon badan dunida? Waxaa loo tilmaamay nin suufi ah (oo adduun iska nacay). (Dilahii is keenay isagoo ictiraafsan dambigiisa) baa u tegay suufigii oo ku yiri: waxaan diley sagaal iyo sagaashan qof, ee wax toobad ah ma leeyahay? Suufigii wuxuu ku jawaabay:  Maya. Ninkii wuxuu dilay suufigii sidoo kale oo boqol kaga dhigay. Dilihii baa misna weydiiyey dadkii: Yaa u cilmi roon dadka aduunka? Waxaa loo tilmaamay nin caalim ah. Markaa buu u tegey oo ku yiri: Waxaan diley boqol qof ee toobad ma leeyahay? Wuxuu yiri: caalimkii:  Haah, waxba ma jiraan kala dhex gali kara adiga iyo toobada: Tag oo aad dhulkaa. Waxaa ku nool dhulkaa dad dhowrsoon oo suubbanayaal ah oo Alle caabuda ee Alle la caabud hana ku soo noqon dhulkaaga waayo waa dhul shar badan. Ninkii dhulkaa buu aaday. Markuu kala bar marayaa mawdkii u yimid. Muran iyo dood baa wuxuu ka dhex billowday malaaigtii cadaabta iyo malaaigtii naxariista la xiriira cidda nafta ka qaadeysa. Malaaigtii naxariistu waxay tiri: Marba haduu soo toobad keenay oo qalbigiisu Alle u soo jeedsaday (annagaa nafta ka saareyna oo xilkiisu nasaaran yahay): malaaigtii cadaabtuna waxay tiri: weligiisba ma uu sameyn wax khayr ah (sidaas awgeed annagaa xilkiisa leh). Waxaa markaas u yimid malag suurad Aadane leh, waana u gar dhigteen, wuxuu yiri malagii: Cabbira inta labada dhul u dhaxaysa, tii u xigaa leh. Markaasay cabbireen mise dhulkii uu u socdey buu xigaa.
Waxaa xilkiisii markaa qaaday malaaigtii naxariista. (Bukhaari iyo Muslim)
Warein kale baa waxay odhaneysaa: Dhulkii dadka fiican buu taako u dhawaadey, markaasaa dadkaas laga mid yeelay.
Werin kale waxay ahayd: Allaa labada dhul midna fogow yiri, midna soo dhowow yiri, wuxuu Alle yiri markaas: Qiyaasa inta u dhexaysa, mise tan ( dhulka dadkii fiicnaa) bay taako u dhowdahay oo wuu u dambi dhaafay. Xadiis kalena wuxuu ahaa: Wuxuu ugu soo dhowaaday dhulkii uu u socday laab ku socod iyo xamaarasho.
Sidaa awgeed buu rasuulkii Alle (S.C.W.) Daboolka uga qaaday meesha loo socdo, si loogu diyaar groobo. Waxaa baxay col weyne aad u culus, oo aan wax la diwaan gelin karo ahayn, ninkii damco inuu maqnaado kama uu baqayn in la ogaado, haddaan waxyi ka soo dagin.Dullaankaas wuxuu Rasuulku (S.C.W.) qaaday goor ay mirihii soo goayaan, hooska geedahuna macaan yahay, anigana sahlashaa I gashay. Rasuulkii (S.C.W.) waa uu diyaar garoobey, muslimiintiina waa diyaargaroobeen, aniguna inaan diyaar u kallahaa, anoo aan waxba qabanna waa soo noqdaa, waxaan is leeyahay waxba ma ahoo waa kuu fududahay markii aad doonto iska daba wareeg ma aan deyn jeer ay Nebigii (S.C.W.) iyo muslimiintii dhaqaaqeen anigoo aan waxba diyaarsan. Duullaankii caaradkuu la baxay oo waa tegey, wax weli ii diyaar ahina ma jirin, waxaan is iri alleylehe raro, oo gaar, la iimase qadarin, magacay ba;ye bal maan falo, markii uu Nebigu (S.C.W.) tegey yaan calool xumo iyo murugo bilaabay markii aan dadka soo dhex galo laguma arko qof aan ku dayan karo, oo weheshan karo ragga joogaa waa nin munaafaqnimo lagu yiqiin iyo nin jihaadka aan awood u lahayn oo Alle ka cafiyey. Nabigii (S.C.W.) ima uu xusuusan ilaa uu Tabuuk gaarey, markii uu Tabuuk tegey buu wuxuu yiri isagoo fadhiya: Kacab ibn Maalik muxuu falay? Wuxuu yiri nin reer banii Salamah ahi dharkiisii baa reebay iyo hadba gees is ka dhugasho. Mucaad ibn Jabal wuxuu ku yiri ninkii reer Salaamha: wax daran baad ku hadashay! Wallaahi rasuulkii Alloow kuma aannu ogin waxaan khayr hayn, rasuulkii Alle (S.C.W.) waxba ma oran oo waa iska aamusay.. Nin bidhaamaya oo wirwiraayaa meel fog ka soo muuqday, wuxuu yiri rasuulkii Alle (S.C.W.): Abuu Khaysama noqo, mise waa abuu Khaysama laftigiisii oo ahaa ninkii suuska timirta ah sadaqaysan jirey oo ay munaafiqiintu ku durayeen. Markii aan maqlay inuu Nabigii (S.C.W.) soo laabtay oo soo socdo yaa walwalkii iga batay oo been inaan sheegaa igu soo dhacday, waxaan is weydiinaayey sedee Nebiga (S.C.W.) uga maslaxdaa arrintaa manta. Wixii wax garaayey oo ehelkkayga ahaa baan kala tashaday, markii aan maqlay in uu Rasuulkii (S.C.W.) soo ogog yeeshay, yaa tashwiishkii oo dhammi iga baay oo waxaan goaan saday inaan runta sheego.
Mar haddaanan haysan wax aan kaga badbaadi karo. Nabigii (S.C.W.) waa yimid Sidii ay caadadiisu ahaydna kolkuu safarada ka yimaado masjidkuu ku soo hormaray oo laba racadood ku tukaday, oo dabeed fariistay si uu dadkii ugu qaabilo, markii sidaa yeelay baa waxaa u yimid raggii haray oo dhowr iyo siddeetan nin gaaraya, waa u cudur daarteen waana dhaarteen, waana uu ka yeelay oo u dembi dhaaf dalbay waxooda u qarsoonna Alluu u daayey. Markaasaan anna imid oo salaamay suu inta dhoolbiray buu wuxuu yiri isagoo caro laga dareemayo: Kaalay, waa u imid oo hor fariistay. Wuxuu yiri (S.C.W.): Maxaa ku reebay? soo Alle kama aadan gadan rakuubkaaga? Waxaan iri: Rasuul Alloow (S.C.W.) wallaahi haddaan manta cid kale oo adduun ag joogi lahaa cudur daar aan kaga fakado ma waayeen waana doodi aqaan laakiinse waxaan ogahay, haddaan manta kuu sheego been aan kugu raalli gelinaayo, waxaan halis u ahay in Alle iigu caroodo, haddaan run kuu sheegana iyadaan xag Alle aayaha dambe ku rajo fiicanahay. Waa sidaase wallaahi baanan wax cudur daar ah haysan, wallaahi baysan jirin mar aan ka xoog iyo xoolo roonaa markaan kaa haray. Markaan sidaas iri buu wuxuu yiri Rasuulkii Alle (S.C.W.): Kanu run buu sheegay. Haddaba iska tag inta Alle xaalkaaga wax ka oranaayo. Rag reer banii Salimah ah baa inta i soo raacay i yiri: waxaanu ognahay inaadan hadda ka hor wax aadan biin ma waxaad kari weyday inaad Nebiga u cudur daaratid sidii ay raggii kale oo kaa horeeyeyba ugu cudurdaarteen? Nebiga oo kuu dembi dhaaf dalba baa qaladkaaga oo dhan ku filayde, waa igu celceliyeen oo sidaas wadnaha iiga qabteen ilaa aan ku fakarey tolow nebiga ma ku noqotaa oo hadalkaagii hore ma beenisaa. Waxaan weydiiyey: Cid sidaan yeelay oo kale yeeshay ma garanaysaan? Waxay yirahdeen: Haah, labo nin baa sidaada oo kale yiri oo sidaada oo kale lagu yiri: waxaan iri: oo waa labadee? Waxay yiraahdeen waa Muraara bin Rabiic al-Camri iyo Hilaal bin Umayyah al-Waaqifi, mise waa laba nin oo wanaagsan oo Beder ka qayb galay, oo lagu dayan karo markii ay ii sheegeen baan ku sii adkeystay mowqof kaygii hore. Wixii rag haray Nebigu (S.C.W.) Seddexdayadii buu amray inaan dadku nala hadlin, markaasaa dadkiiba naga cararay oo dhulkii nagu yaraaday oo nin qalaad aan noqday. Konton habeen baan sidaas ku jirney. Labadayadii saaxiib ceeb iyo calool xumo bay guriga la fariisteen. Aniguse dhalinyaraan ahaa firfircoon oo salaaddaan dadka la tukan jirey, carradaydana waa aan mari jirey, wax ila hadlana ma jirin.
Rasuulkuna (S.C.W.) intaan u tago baan salaami jirey markuu inta tukado fadhiyo, markaasaan is oran jirey tolow bishimaha ma dhaqdhaqaajiyey oo salaanta ma kaa qaaday. Intaan ku agtukadaan isha ku xadi jirey markaasuu markaan ka jeedsadana i fiiriyaa, markaan eegana iga jeedsadaa. Arrintii waa igu dheeraatay, goyntii ay muslimiintu igu sameeyeen waa i dhibtay. Waxaan gaarey inaan fuulo derbigii Abu Qataadah oo aan ilma adeer ahayn, dadkana aan ugu jeclaa, waa salaamay, salaantiina waa iga qaadi waayey. Waxaan ku iri abuu Qataadow Alle baan kugu dhaariyeye, ma igu ogtahay inaan Alle iyo Rasuulkiisa jeclahay? Waa iga aamusey, waa ku celiyey oo dhaariyey, waa iga aamusay, haddana waa ku celiyey oo dhaariyey, kolkuu i yiri: Alle iyo rasuulkiisaa og. Markaasay ilmo iga soo qubatay, derbigiina aan ka soo degey. Suuqii baan u soo baxay mise nin reer Shaam ah oo raashin gasac ah wataa baa dadka i weydiinaaya oo leh: yaa Kacab ibn Maalik i tusaaya waa la ii soo tilmaamay. Waa ii yimid wuxuu ii dhiibay waraaq uu iiga wadey boqorkii reer Qassaan. Waxaan ahaa qoraa saa waan akhristay, mise waxaa ku taal; waxaa nasoo gaarey saaxiibkaa inuu ku gooyey, Allena kuma badin dulli, iyo darxumo ee noo imow annagaa ku wanaajinaynee. Markaan akhriyey baan waxaan iri: tanna waa imtixaan kale, markiiba waxaan ku riday tinnaarka oo ku gubey. Kontankii markii ay afartan maalmood tagtaywaxyina uusan soo deign baa nin uu Nabigu (S.C.W.) soo dirayii yimid oo yiri: Nabigu (S.C.W.) wuxuu ku soo faray inaad haweenaydaada ka tagtid. Ma furaa mise maxaan falaa? Wuxuu yiri: Mayee ha taaban oo keliya labadaydii saaxiibna sidaasoo kaluu u faray. Sidaa awgeed baan xaaskaygii ka codsaday inay reerkoodii la joogto bal inta arrintaan Alle si ka oranaayo. xaaskii Hilaal ibn Umayyah baa iyaduna Nebiga (S.C.W.) u tagtay oo tiri Rasuul Alloow Hilaal ibnUmayyah waa sheyb aan tabar lahayn, aan daryeeli karin naftiisa kaligii, adeegena ma leh, marka ma aad diideysaa inaan u adeego? Wuxuu yiri: Maya, laakiinse yuusan kuu dhowaan, waxay tiri: Dan kama leh dumar, tan iyo maalintii uu arrinkaanu billowday ilaa haatanna, waa uu ooyayey. Ehelkaygii baa qaarkood igu yiraahdeen: Maad Nebiga (S.C.W.) weydiisatid inuu xaaskaaga kuu idmo. Hilaal bin Ummayaba waa u idmay xaaskiisu inay u adeegtoe? waxaan iri: Kuma dhibayo Nabiga (S.C.W.) weydiisiga idan kaa oo kale ah, saa wuxuu oranayo ma garanayoe, aniguna waxaan ahay nin dhalinyaro ahe (Hilaal oo kale ma ahi). Sidaasna toban beri baan ku jirnay oo kontonkii habeen ay noogu buuxsameen, tan iyo markii nala gooyey. Waxaan tukadey salad subax, waxay ahayd habeenkii kontonaad subaxiisii dambe, anigoo fadhiya gurigeyga, naftaydiina ciriiryoontey oo dhulkii balaarnaa sidii Alle naga sheegay igu yaraaday, baan waxaan maqlay nin buur korkeeda ka dhawaaqaya oo leh: Kacab ibn Maaligoow bishaarayso. Markaasaan sujuud shugri la dhacay, oo waxaan gartay in faraj yimid. Rasuulku (S.C.W.) markii uu salaaddii subax tujiyey dadkii buu dadkii u sheegayin Alle naga toobad aqbalay, markaasaa dadkii noo soo kala orday iyagoo noo bishaaraynaaya. Labadaydii saaxiib dad baa aaday. Anigana ninbaa faras xaggayga u soo fuulay, nin kale oo reer Aslam ah baa isna xaggayga u soo ordday oo buur dhaladeed fuulay oo iiga dhawaaqay. Saa dhawaaqiibaa faraskii ka soo hor maray markuu ii yimid ninkii aan codkiisa maqlay oo ii bishaareeyay baan labadaydii go siiyay, bishaaradiisii darteed. Ilaahay baan ku dhaartay maalintaa dhar kale ma haysan, sidaa awgeed baan laba go u soo deyntey oo maalintaas wax kale ma aan haysan Dabadeedna Nabigii (S.C.W.) baan aadey si aan qaddirinta iyo tixgelinta iyo mahadda aan u hayo ugu jeediyo. Intaan u socdayna rasuulka dadku waxay iila kulmayeen koox, koox iyagoo toobad aqbalka iigu tahniyaday-naya. Masjidkii baan soo galay, waxaan arkay nebigii (S.C.W.) oo fadhiya dadkiina hareero fadhiyaan waxaa soo kacay oo igu soo orday Dalxag bin Cubeydullaah waana i salaamay oo ii tahniyadeyey, isaga keliyaana muhaajirintii iiga soo istaagay  Kacab Dalxah ma illoobi jirin. Waxaan salaamay Nebigii (S.C.W.) oo wajigiisu farxad la ifayo, wuxuu yiri: bishaarayso waa maalintii kuugu khayr badnayd oo ku soo marta tan iyo markii hooyadaa ku dhashay. Waxaan iri: Rasuul allow ma xaggaaga mise waa xag Alle? Wuxuu ku jawaabay: Mayee waa xag Alle.
 Alle waa ka toobad aqbalay Nabiga iyo Muhaajiriintii iyo Ansaartii raacay saacaddii dhibaatada, markii qaar ka mid ah qalbiyadoodu ku sigteen inay qalloocdaan, kadib; dabadeedna waa ka toobad aqbalay, waa u turid iyo naxariis badan yahaye iyo seddaxdii dib loo dhigay jeer dhulkii ku yaraaday wuxuu ballaarraa. Naftoodiina ku ciriiryoontay ayna yaqiinsadeen inaan Alle meel looga irkadaa jirin isaga maahee, dabadeedna uu toobadii ka yeelay si ay u toobad keenaan, Alle isagaa toobada Aqbalaha naxariista badan ahe. Kuwa xaqa rumeeyoow dhowra waajibka iyo xilka uu Alle idin saaray oo run sheegyada ka mid ahaada Suurada at-Towbah:117-119.
 Waa idiin dhaaran doonaan markii aad u noqotaan si aad isaga deysaan, ee iska daaya waa qurune, hoyaadkooduna waa Jahannama oo jasadii wixii ay kasbadeen ah, waa idiin dhaaranayaan, si aad uga raalli noqotaan, haddii aad ka raalli noqotaanna Alle raalli kama noqdo qoon faasiqiin ah. Suurada at-Towbah:Aayadaha:95-96.
Werin kale oo xadiiska wuxuu sheegayey inuu Nabigu (S.C.W.) Tabuuk u duuley maalin Khamiis ah, jeclaana inuu khamiisaha baxo. Xadiis kalena wuxuu lahaa: Safarka wuxuu ka imaan jirey nabigu maalintii, weliba barqadii, wuxuuna ku soo hormari jirey masjidka oo inta labo rakcadood ku tukado fariisan jirey. 22. Abuu Nujayd Cimraan bin Xusayn (A.K.R.) wuxuu yiri: Haweeney reer Juhayna ah baa Nebiga (S.C.W.) u timid iyadoo ilmo garac ah (Wacal ah) uurkiisa leh oo tiri: Rasuul Alloow (S.C.W.) waxaan galay dambi ee sida Quraanku dhigaayo ha layga yeelo. Nabigu (S.C.W.) markaasuu wuxuu u cid diray waligeedii oo faray inuu wanaajiyo una keeno kadibb markii ay dhasho.
Ninkii masuulkeeda ahaa Sidii buu yeelay, oo wuxuu u keenay nebiga (S.C.W.) wuxuuna amray nabigu in la dhagaxyeeyo illaa ay ka dhimato amray. Waana la dhagaxeeyay ilaa naftii ka baxday. Dabadeedna rasuulkii Alle (S.C.W.) waa uu ku tukadey. Cumar (A.K.R.) baa yiri: oo rasuul Alloow ma intay dhilleysatay baad ku tukanaysaa? Rasuulkii Alle (S.C.W.) Wuxuu yiri: Haah, waxay toobad keentay toobad keen deeqi lahaa hadii laqaybsho toddobaatan qof oo dadka reer Madiina ah. Towbad keen tani ka wanaagsan oo ka darajo badan ma jirto, bal eeg arrinteeda waxay dooratay inay runta sheegto iyadoo og inay nafta sidaa ku weyneyso iyadoo Alle raalli gelintii sidaa u yeeleysa. (Muslim)
23. Ibn Cabbaas iyo Anas ibn Maalik (A.K.R.) waxaa laga soo xigtay in Nebiga (S.C.W.) yiri:  Ina Aadane hadduu leeyahay tog dahab ah, wuxuu jeclaan lahaa inuu labo sii yeesho, afkiisana (damaciisa) waxaa oo kaliya buuxin kara ciidda qabriga (taasi waa markuu dhinto) Allena waa ka toobad aqbalayaa kii toobad keena. (Bukhaari iyo Muslim)
24. Abuu Hurayrah (A.K.R.) wuxuu yiri: Nabigu (S.C.W.) wuxuu yiri: Alle weyne kor ahaaye, wuxuu ku qoslaa laba nin oo midkooda hore kan kale dilay labaduna Jannada wada gali doonaan (dhimashadooda kadib) midkood oo horay loo dilay isagoo jidka Alle u diriraaya jannadii buu galal. Markaa kadib, Buu Alle u naxariisanayaa kii wax dilay kaa oo gali Islaamka, oo u diriri jidka Alle oo loo dilayana (sidaana isna jannada ku galaya) (Bukhaari iyo Muslim) WALAAHU ACLAM
sumaya muhammed sandara1432011@hotmail.com Friendly Link